Tsy Voasakan-tSisintany ny Mozika, Saingy Mbola Nolavin’ny Kaonsilàn’i Etazonia ny Visa Ho An’ireo Mpikambana Amin’ny Antoko Mpihira Indoneziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2017 14:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 日本語, Español, English
Ny antoko mpihira Vox Angelica nanao fampisehoana tamin'ny fifaninanana iraisampirenena. Pikantsary tao amin'ny lahatsary YouTube.
Antoko mpihira Indoneziana telo no napetraka hifaninana tamin'ny fifaninanana amboarampeo Sing ‘n’ Joy tao Princeton, New Jersey, tamin'ny volana lasa, saingy tsy tonga tao amin'ny Garden State ny antoko mpihira roa satria nolavin'ny masoivoho Amerikana ao Jakarta ny fangatahana visa ho an'ireo mpikambana am-polony ao amin'ny amboarampeo.
Vox Angelica avy ao Manado, Sulawesi Avaratra sy El-Shaddai avy ao Sumatra avaratra ireo antoko mpihira roa ireo.
Naneho ny ahiahiany ireo vondrona voatonona ireo sy ny ny mpitsara tamin'ny fifaninanana fa vokatry ny famoretana ataon'ny Fitantanan'i Trump ho an'ireo mpitsidika avy amin'ny firenena maro an'isa Miozolomana izany. Vao mainka miha-sarotra ny toe-javatra, satria Indonezia no firenena maro Miozolomana indrindra manerantany, na dia tsy izy irery aza no firenena kendren’ ny filoha Trump amin'ny didim-panjakana mampiadi-hevitra momba ny mpitsoa-ponenana sy ny fifindramonina.
Rehefa nandre momba ny fandavàna visa ho an'ireo antoko mpihira roa Indoneziana, dia nandefa lahatsary tamim-pahatsorana maneho ny alahelon'izy ireo ny mpitsara tamin'ny fifaninanana, ary manamafy fa “tsy voasakan-tsisintany ny mozika”.
Noho ny toe-javatra tsy nampoizina tamin'ny politika Amerikana vao haingana, tsy afaka namonjy ny fetintsika ny antoko mpihira, El Shaddai sy Vox Angelica. Ary malahelo izahay noho izany. Saingy … na inona na inona “sisintany” nampidirin'ny politika, tsy misy sisintany ny mozika, tsy misy sisintany ny firaisantsaina amin'ny zava-kanto, tsy misy sisintany avy amin'ny olombelona ny mitolona mihira avy ao am-po. Mampitambatra ny maha-olombelona antsika ny mozika, ary manasa anao izahay mba ho anisan'izany.
Tamin'ny alalan'ny pejy media sosialin'izy ireo, nanazava ny tsy fahafahany nanatrika ny fetiben'ny mozika tao Princeton ny antoko mpihira El-Shaddai:
Ry namana, fianakaviana, mpiara-miasa, mpiara-mianatra maneho ny fialantsininy ny antoko mpihitra El-Shaddai noho ny tsy fahafahany nifaninana tany Princeton-New Jersey, any Etazonia, noho ny fandavàna visa avy amin'ny masoivoho Amerikana ao Jakarta .
Nanomana ny fepetra rehetra ilaina izahay ary nangataka visa fanindroany.
Mino ihany koa izahay fa nitranga izao noho ny politika Amerikana henjana ho an'ireo mpitsidika. Eto Jakarta izahay ankehitriny, vonona hiverina any Medan ary hiomana amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena hafa. Manantena hanatsoaka lesona avy amin'ity zava-nitranga ity izahay, mivavaha ho anay azafady.
Misaotra noho ny fitokisanao sy ny fanohananao nandritra ity fitsapana ity.
Niresaka tamin'i Edward Palit, tale mpanatanteraka sy mpitondra tenin'ny Vox Angelica ny Global Voices, namariparitra ny fandraisan’ ireo mpikambana ao amin'ny antoko mpihira momba ny fandavana ny visa ho azy ireo izy;
Antoko mpihira ahitana lahy sy vavy miisa 41 izahay (anisan'izany ny mpitantana sy ny mpitarika). Tsy maintsy nandeha fiaramanidina nankany Surabaya niala tao Manado izahay mba atao fanadihadiana tao amin'ny Masoivohon'i Etazonia ao Surabaya. Mpikambana ampolony tao aminay no nolavina ny visa, anisan'izany ny mpitarika ny antoko mpihira. Nilaza ireo tanora mpikambana ao aminay fa nolavina ny visa an'izy ireo satria mbola tsy nandeha tany ivelany izahay teo aloha, saingy tsy navela niditra tao Etazonia noho ny antony hafahafa ihany koa ny lehibenay izay matetika mandeha any ivelany miaraka amin'ireo antoko mpihira vahiny, noho izy sy ny vadiny (izay iray amin'ireo mpihira ao aminay) mpihavana vao haingana.
Nampian'i Palit fa sarotra sy mahakivy ny dingana fangatahana visa:
Efa niofana tsara izahay hatramin'ny nandraisanay ny fanasana hifaninana (ao Princeton). Ankoatra izany olana goavana ho an'ny antoko mpihiranay ny dia tany Surabaya satria tsy manana mpanohana maharitra izahay. Tena diso fanantenana izahay noho ny tsy fahafahana mampiseho ny asanay mafy saingy mitodika amin'ny lanonana hafa ao amin'ny faritany izahay ankehitriny, anisan'izany ny fampisehoanay sy ny atrikasanay manokana ho fankalazana ny tsingerintaonan'ny antoko mpihitra.
11 Mey 2018Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana